Hayadda socdaalka oo wax ka badashay xaaladda qaxootiga suuriyiinta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Magnus Hjalmarson Neideman/Anders Wiklund/Scanpix. Montage: Sveriges Radio.
Hayadda socdaalka oo wax ka badashay xaaladda qaxootiga suuriyiinta
La cusbooneeyay tisdag 3 september 2013 kl 15.16
La daabacay tisdag 3 september 2013 kl 09.11
Hayadda socdaalka ayaa go'aan ku gaartay in dhammaan la siiyo sharci-deggenaansho oo joogto ah suuriyiinta magan-gelyada dalkan ku yimaada. Go'aankaa ayaa dalka Iswiidhen ka dhigaya midkii ugu horeeyey ee waddammada EU oo qaxootiga suuriyaanka siiya deggenaansho joogto ah iyo iney qaraabadood keen-san karaan:
– Iska hor-imaadka dalka ka aloosan ayaa la oran karaa inuu ka sii xumaaday. Waxaana noo muuqatay inuu sii daba dheeraanayo oo aan la garan kareyn goorta uu soo af-jarmi doono, sidaa daraadeed ayaannu wax uga bedelney go’aannadii la xiriirey iyo in sida xeerka caalamiga ahi qoreyo la siiyo sharci-deggenaansho. Waana midkaa go’aanka aannu gaarney, sida uu sheegay Daniel Elliasson, agaasimaha hayadda socdaalka.
Muddo iminka sannad laga joogo ayay hayadda socdaalku go’aan ku gaartay in soo-galootiga suuriyaanka ah la siiyo sharci-deggenaansho oo saddex sannadood oo ku meel-gaar ah. Wixii intaa ka dambeeyey ayay xaaladda dalkaasi ka sii xumaatay:
Waxaa halkaa ka maqan wada-hadal nabad hor-seedi kara, sidaa daraadeed ayay u muuqataa in caqabaddu sii daba-dheeraanayso sida hayadda socdaalku qabto.
Qiyaastoo 8 000 oo ah suuriyaanka dalka ku dhaqan, isla-markaana haysta sharci ku-meel-gaar ah ayaa loogu bedeli doonaa mid joogto ah. Middaasina oo u ogolaaneysa iney qaraabadood dalbadaan.:
– Waa saameynta ugu ballaaran ee is-bedelkani ku yeelan karo soo galootiga suuriyaanka ah iyo iney dalban karaan sidii ey ula midoobi lahaayeen qooyskoodii. In qooysaska suuriyaanka ee ku sugan dalkaasi ama waddammada jaarka ey ka soo dalban karaan xarrummaha dalkani dibadda ku leeyahay sidii ey ula midoobi lahaayeen qaraabadood, sida uu sheegay Anders Danielsson.
Maadaama aanu dalkani safaarad ku lahayn dalka Suuriya ayay khasab ku noqonaysaa ciddii doonaysa iney sameeyso dalab ay kula midoobayso qooyskeeda inay u baqoosho mid ka mid ah waddammada uu dalkaasi jaarka la yahay ee hoowl-wadeennadu ka joogaan dalka Iswiidhen. Macnuhu marka waa sidaa?
– Haa, waa sidaa. In la tago waddan ey ka dalban karaan ee ka mid ah waddammada jaarka la ah. Xaaladdan ayaa soo-galootiga suuriyaanka u sahleysa sidii ey si sharci ah ugu soo geli lahaayeen Yurub si ey qaraabadood/qooysaskooda ula midoobi lahaan, maadaama aanu iminka jirin waddan ka mid ah midowga Yurub ee siiya muwaadiniinta Suuriya suurtagal ey ugu soo baqooli karaan ama dal-ku-gal. Halka waddada keliya ee furani tahay iney mukhalas adeegsadaan.
Dhanka kale hayadda caalamiga ee Qarammada Midoobey ayaa maanta soo saartay war-bixin lagu sheegay in tiro gaareysa 2 malyuun oo suuriyaan ah ey ka soo qaxeen dalkoodii hooyo, sida ay sheegtay laanta caalamiga qaxootiga UNHCR.
Waa tiro toban jeer ka badan kolka loo barbar-dhigo sannad hortii.
Waxaa iyaduna jirta in 4 malyuun oo suuriyaan ah ey dalka gudihiisa ku qaxeen wixii ka dambeeyey bilowgii isku dhacyada ee bishii maarso sannadkii 2011.
Soo-galootiga suuriyaanka ayaa ku hamineya la midowga qooysaskooda
Illaa iyo hadda tiro gaarsiisan 1600 oo ka mid ah soo-galootiga suuriyaanka oo heysta sharci deggenaansho oo ku meel-gaar ah ayaa xiriir la sameeyey hayadda socdaalka oo la socodsiiyey iney dooneyaan sidii ey ula midoobi lahaayeen qooysaskooda. Waxaa dadyoowgaa ka mid ah Hanna Jacob oo leh laba carruur ah. Mid ka mid ah caruurta, wiilkeeda oo laba jir ah ayaa ka xanuunsan wadnaha, una baahan qalliin.
Soogalootiga reer suuriya oo ku faraxsan go'aankii hayadda socdaalka